What Doesn't Kill Me — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငါ့ကိုအဘယျသို့ Kill မဟုတ်
သင်တစ်ဦးခက်အချိန်အားဖြင့်တာပေါ့သောအခါ,, လူကအမြဲပြောပါအဘယျမသိရပါဘူး. အဆိုပါရလဒ်အနတ္တclichéသို့မဟုတ်သင်ဖွင့်အားပေးစရာ trite ကြိုးစားမှုဖြစ်ပါတယ်. အစဉ်မပြတ်ငါclichéနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုသူတို့ကိုဟုလူတစ်ဦးမှဘာမှမဆိုလိုပါဘူးနှင့်အမှန်တကယ်သူတို့ကိုကြားနာပုဂ္ဂိုလ်မကူညီကြဘူးသောကြင်နာ phrases- ခဲ့တယ်. တူရီစရာအမှုအရာ, "ချင်းပြည်နယ်တက်" နှင့် "ဒါဟာပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ " တကယ်ပဲ? သင်ဘယ်လိုသိသလဲ? သင်သည်သင်၏အဆွေခင်ပွန်းတို့၌ရောင်ခြည်တော်ကိုပေးကမ်းခြင်းဖြင့်မည်သည့်မျက်နှာသာမပွု, တစုံတခုကိုအမြစ်တွယ်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်း fluffy မျှော်လင့်ချက်. ကြှနျုပျတို့လိုနက်ရှိုင်းသောနာကျင်မှု hits ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ထိန်းရန်အစိုင်အခဲသမ္မာတရားကိုကျောက်ရတဲ့အခါ.
ကင်ဆာနဲ့သူ့ရဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းစဉ်အတွင်း, ခရစ္စတိုဖာ Hitchens ကျွန်တော်တို့ပတ်ပတ်လည်ချပစ်အအနတ္တစာပိုဒ်တိုများအချို့နဲ့ဆင်တူစိတ်ပျက်ထုတ်ဖော်ပြောဆို. သူကသူ့စာအုပ်ထဲတွင်သူတို့ထဲကတစ်ဦးတိုက်ခိုက်နေအနည်းငယ်စာမျက်နှာများကိုသုံးစွဲ, သေဆုံးမှု. သူကပြောပါတယ်, "အထူးသဖြင့်, ငါအနည်းငယ်သောကြေငြာချက်ထုတ်ပေးရပ်တန့်ပြီ '' သမျှငါ့ကိုအားကောင်းစေသည်ကိုသတ်မထားဘူး။ '' "သူကဆိုအပေါ်တတ်, "ဟုအဆိုပါ brute ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောက၌ ... သင်ကိုသတ်နိုင်သမျှသောလည်းအရာများစွာကိုရှိပါတယ်, သငျသညျမသတ်ဘူး, ပြီးတော့သိသိသာသာအားနည်းသငျသညျထားခဲ့ပါ။ "သင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမခံစားရနိုင်ပါ?
ဒါဟာစိတ်ပျက်စရာအသံ, ငါမူကား Hitchens တစ်ဦးသဘောအရမှန်သည်ထင်. သာကျွန်တော်တို့ကိုအားနည်းစေကြောင်းခက်ခဲမှုအရာအားဖြင့်သွားနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာအသေခံဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်မအတော်လေးဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ငါတစ်ယောက်ယောက်ကမေးခှနျးမေးစိတ်ကူးနိုင်, “ယင်းကိုမည်သို့ကြောက်မက်ဘွယ်သောအရာတစ်ခုခုကိုငါ့ကိုခွန်အားကြီးလုပ်နိုင်?” တောင်မှအများဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့လူကျနော်တို့ရဲ့ပြိုလဲကမ္ဘာ၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သဖြင့်ဖြိုဖျက်နိုင်ပါတယ်. ကချိုးသည်အထိအကောင်းမြင်သာဤမျှလောက်များစွာသောရိုက်နှက်ခြင်းရှင်သန်နိုင်, နှင့်အဖြစ်မှန်နောက်ဆုံးထုတ် chokes. တစ်ချိန်ကချစ်စရာတံပိုးမှုတ်သောအခါကြောင်းစာပိုဒ်တိုများယခုအချည်းနှီးထင်ရ. သို့သော်ကောင်းကောင်းအဓိပ္ပာယ်စိတ်ဓါတ်များ Hitchens အစဉ်အဆက်စစ်မှန်တဲ့တိုက်ခိုက်သည်? ထင်တာပဲ.
စစ်မှန်တဲ့စေနိုင်ပါတယ် "ငါ့ကိုခွန်အားကြီးစေသည်ဘယျလိုသတ်ပစ်မထားဘူး", ဒါပေမယ့်ယခုဘဝထက်ကျော်လွန်အရာတစ်ခုခုရှိရဲ့သာလြှငျ. ယခုဘဝဆိုရငျ, ဒီလောက, နှင့်ဤကိုယ်တမျိုးရှိ၏အပေါင်းတို့, Hitchens မှန်သည်. ဒါဟာမုသားင်. ဒါဟာတကားဟုကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့, "ငါ့ကားကအားကောင်းစေသည်အဘယျသို့စုစုပေါင်းမထားဘူး။ " ရယ်စရာရဲ့. သင်ယုံကြည်ဖို့သမ္မာတရားကိုလစျြလြူရှုရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ်. သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ယာယီစမ်းသပ်မှုတွေကိုထာဝရအဓိပ်ပာယျကိုအချို့မျိုးရှိပါကကြောင့်အရာအားလုံးပြောင်းလဲ.
ပေါလုကကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါသည်, "ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဘုရားသခင်ကိုချစ်နှင့်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်နှင့်အညီဟုခေါ်ကြသည်သူမြား၏ကောငျးကြိုးအတှကျအတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။ " ဒီကျမ်းပိုဒ်တခါတရံနှိပ်စက်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ကျမ်းစာရှိသမျှသည်အတွက်အလှဆုံးကတိတစျခုရဲ့. ဤသည်ခရစ်ယာန်များကိုဘယျသူမှမအောငျဖြစ်ကြောင်းမဆိုလိုပါ. ကြှနျုပျတို့အားလုံးစမ်းသပ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်, ငါတို့မူကားနောက်ဆုံးမှာသူတို့ကိုအားဖြင့်ရှုံးနိမ့်မရနိုငျ. တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆိုးဆုံးရန်သူများကို, ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့သေမင်းကဲ့သို့, ခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်လာ, သူတို့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်အလုပ်လုပ်သောကွောငျ့.
ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအတိအကျ, ဤကြီးကျယ်သောစမ်းသပ်မှုတွေကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအားကောင်းစေနိုင်? ဤတွင်သုံးနည်းလမ်း (သိသာထင်ရှားသောထပ်နှင့်အတူ):
ငါသည်ငါ၏အသက်တာ၌အရာအားလုံးတူခံစားရတဲ့အခါမှာကောင်းစွာသွား, ငါ့နှလုံးချက်ချင်း Self-မှီခိုသို့ခြင်္သေ့. ဒါဟာပျက်ကွက်ဘယ်တော့မှ. ငါစဉ်မှာဘာမှကင်းမဲ့ကြပါဘူးယူဆသောကြောင့်, ငါလျော့နည်းဆုတောင်းရန်စတင်. ငါအရာအားလုံးကိုကောင်းစွာသွားရဲ့အကြောင်းပြချက်ရယ်ထင်သောကြောင့်, ငါမာနထောင်လွှားဖြစ်လာ. သူတို့အားကာလ၌, ငါသည်ဘုရားသခင်၏ကောင်းသောလက်ဆောင်များကို၏လှူကြောင်းမေ့လျော့ပေါ့, ငါနေဆဲကိုယ်တော်ငါ့ကိုဆက်ထိန်းရန်လိုအပ်ပါတယ်. ငါသူ၏သနားခြင်းကရုဏာ၏အအပေါင်းတို့အားခွင့်ရယ်ကယူဆတာပါ.
သို့သော်စမ်းသပ်မှုတွေငါတို့လမ်းလာသောအခါ, သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားနည်းခြင်းကိုပြသ. အနာရောဂါငါတို့ဘယ်လောက်ပျက်စီးလွယ်သတိပေး, lay-off ခက်ခဲအလုပ်ဘာမှအာမမခံကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး, နှင့်ပဋိပက္ခကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဧရိယာ၌ယရှေုသညျလိုအပျကွောငျးကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး.
2 ကောရိန္သု 12 အားနည်းခြင်း၏ကာလ၌ငါ့ကိုတစ်ဦးနှစ်သိမ့်သည်. ပေါလုသည်ထိုသူကိုဘုရားသခင် "ကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ်ရုံးတင်စစ်ဆေးပေးသောအသိအမှတျပွု [သူ့ကို] ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟုဖြစ်လာမှ "ထိုအခါထိုသူသည်မိမိအအားနည်းခြင်းအဖြစ်၌ဝမ်းမြောက်စွာဂုဏ်ယူကပြောပါတယ်, သူကစမ်းသပ်မှုတွေအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအကြောင်းအရာရဲ့. ပေါလုမညျသူ့စမ်းသပ်မှုတွေအကြောင်းအကြောင်းအရာနှင့်ပင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်? ငါပေါလုသည်ဤစမ်းသပ်မှုတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူကဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်အာဏာလိုအပ်နေသည်ဟုပါစေသည်ဟုဆိုသည်ထင်. self-မှီခိုအားနည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ခရစ်တော်အပေါ်မှီခိုအစွမ်းသတ္တိ. ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကပြောပါတယ်, "ငါသည်အားနည်းဖြစ်ကြောင်းကိုလိုက်တဲ့အခါ, ထို့နောက်ငါအား။ "
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်သိမ့်နှင့်ကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးကိုအရေးအပါဆုံးအရာမဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်သည်အထိကျွန်တော်တို့အကြီးအကျယ်စမ်းသပ်မှုတွေကိုသည်းခံနိုင်ပါလိမ့်ဘယ်တော့မှ. နှစ်သိမ့်နှင့်ကျန်းမာရေးဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုပေးစေခြင်းငှါနှစ်သက်ကြောင်းကောင်းသောအရာဖြစ်ကြ၏. သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်အဘို့ဘုရားသခငျ့မူလတန်းအလိုတော်ယေရှုကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖြစ်ပါသည်. ထိုအခါသူသည်ပြည့်စုံစေခြင်းငှါစမ်းသပ်မှုတွေကိုအသုံးပွုဖို့ပင်လိုလိုလားလားင်. ဟေဗြဲ 12 ကပြောပါတယ်, "[ဘုရားသခ] ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကျိုးအတွက်စည်းကမ်းများကိုကျွန်တော်တို့ကို, သူ၏သန့်ရှင်းခြင်းတရားတော်ကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။ "သင်တန်းညျဘုရားသခငျ၏အားကစားရုံ၌တစ်ခါတစ်ရံစိတ်ထိခိုက်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုအားကောင်းစေမည်.
ဂျိမ်း 1:2 စိတ်ထဲကြွလာ, သူက "ကအားလုံးကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ် Count မှကျွန်တော်တို့ကိုဖျောပွထားရှိရာ, ငါ့ညီအစ်ကိုတို့, သငျသညျအမြိုးမြိုးကိုမျိုး၏စမ်းသပ်မှုတွေတွေ့ဆုံရန်ရသောအခါ…"ကျနော်တို့ကဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရေတွက်သင့်ပါတယ်အကြောင်းပြချက်ကထုတ်လုပ်နေခရစ်တော်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏နှိမျ့ခခြွငျးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျြောရှငျမှုထက်ပိုအရေးကြီးတယ်. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးအားကြီးသောဖြစ် သာ. ကောင်း၏ဒါဟာင်.
ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုအပွစျကိုအားဖြင့်အားနည်းနေကြတယ်, ကျွန်တော်မကြာခဏကိုယျ့ကိုယျကိုဒီလောကကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိပါတယ်အရာကိုပိုပြီးအဘို့အတောင့်ကိုရှာတှေ့. သို့သော်ဤကမ္ဘာ၏ယာယီပျော်ရွှင်မှုငါတို့ထံမှယူကြသောအခါ, ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြေကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမဟုတျကွောငျးသတိပေးပါတယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားအဖြစ်တခြားနေရာဖြစ်ပါသည်.
ငါကောင်းတဲ့ဟိုတယ်များတည်းခိုတတ်, ငါအပေါငျးတို့သအခွင့်အရေး၏အားသာချက်ယူဖို့ကြိုးစားဘူးသောအခါ. ထိုအခါမူကားငါသည်ငါ၏မယားကိုလက်လွတ်ရန်စတင်, ပြီးတော့ငါရောက်စေဖို့ရည်ရွယ်အဝတ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသဘောပေါက်, ပြီးတော့ငါအခန်းဝန်ဆောင်မှုကိုငါ့ဇနီး၏ချက်ပြုတ်အဖြစ်ထက်ဝက်ခန့်အဖြစ်သည်ကောင်းသဘောပေါက်. ဒါဟာဟိုတယ်, ငါ့အိမ်ကမဟုတျကွောငျးအကြှနျုပျကိုသတိပေး. ဆိုချင်ပါတယ်အလိုဆန္ဒများကိုအိမ်မှာဖြစ်ဖို့ကျွန်မကိုရှည်လျားပါစေ. ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဘယ်မှာဒီမြေကြီးမမက, နှင့်စမ်းသပ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရဒိသုတခြားနေရာကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး, ငါတို့သခင်နှင့်အတူ. ကောင်းကင်ဘုံသည်မရှိလို့ဆိုချင်ပါတယ်အလိုဆန္ဒများရှိလိမ့်မည်, ငါတို့သခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Long ရှိသမျှကိုဝစွာကျွေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်. သူကအစဉ်အမြဲနာကျင်မှုဖျက်သိမ်းပြီးနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်သူ၏ကျေးဇူးတရားကိုသွန်းလောင်းပါလိမ့်မယ်.
ဒါကြောင့်လာမယ့်အချိန်သင်တစ်ဦးခက်ခဲတဲ့အချိန်အားဖြင့်သွားမိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိ, ပင်ဆုံးကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုးကျွန်တော်တို့ကိုအားကောင်းစေနိုင်သောသူတို့အားသတိပေး. မအပြုသဘောစဉ်းစားတွေးခေါ်နဲ့အကောင်းမြင်မှတဆင့်, ဒါပေမဲ့တကယ်မျှော်လင့်ချက်နှင့်စစ်မှန်သောပြောင်းလဲမှုကတဆင့်. တဖန်သင်တို့ခက်ခဲတဲ့ရာသီမှတဆင့်သွားနေရသောအခါ, ဒါကြောင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာခရစ်တော်ရန်သင့်အားဆွဲကြကုန်အံ့. ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိကြ, သခင်ဘုရားသည်သင်နှင့်အတူဖြစ်ပါသည်.
ယုံကြည်သူရဲ့မြျှောလငျ့ခသင်္ချိုင်းတွင်းကိုကျော်လွန်သည်, နောက်အသက်တာ၌အကြှနျုပျတို့ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်နှင့်ကိုယ်တော်နှင့်အတူပါလိမ့်မယ်. So even what kills us makes us stronger.
emr • စက်တင်ဘာလ 17, 2013 တွင် 2:06 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Buddy • စက်တင်ဘာလ 17, 2013 တွင် 2:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
kwena albert • စက်တင်ဘာလ 17, 2013 တွင် 2:39 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မိုက်ကယ် • စက်တင်ဘာလ 17, 2013 တွင် 2:55 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
This wasalittle surprising to read. I had never really thought about positive sayings in negative situations beingabad thing. ဒါပေမဲ့, နောက်တဖန်, it’s through God’s glory that we can manage through the tough times and realize that there is something greater than this world. What doesn’t kill me, or does, makes me stronger because it draws me closer to God.
Franky • စက်တင်ဘာလ 17, 2013 တွင် 3:41 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မစ္စတာ. Tripp Lee
raenee • စက်တင်ဘာလ 17, 2013 တွင် 6:06 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ယောလ • စက်တင်ဘာလ 17, 2013 တွင် 6:39 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
GabeTaviano • စက်တင်ဘာလ 17, 2013 တွင် 6:47 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Your track, ရပါတယ်, has been my theme song the past two years, ခရီးစဉ်ကို. I don’t crank any song louder, and I couldn’t have asked God to pen words that spoke any deeper to my soul. There are moments when even the smallest thoughts of suicide crossed my mind. You sure feel like you’re at war when that’s the honest truth.
But real hope and real change are much more worth it than giving up. That’s so true. There’safight to be fought for each of us. I appreciate you taking the time to pen these words, ခရီးစဉ်ကို. I’ll be reading through this postafew more times. Praising God for speaking through you in our earbuds, on the stage, at the pulpit, in your home, and on the web.
Liam • စက်တင်ဘာလ 17, 2013 တွင် 8:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, keep writing man! Your last two posts have spoke to exactly where I’m at in life and I’ve come across them just when I needed to. God is undoubtedly working through you.
Carlota • စက်တင်ဘာလ 18, 2013 တွင် 12:50 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Tendekai • စက်တင်ဘာလ 18, 2013 တွင် 4:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ချားလ်စ် • စက်တင်ဘာလ 18, 2013 တွင် 4:11 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Kathryn • စက်တင်ဘာလ 18, 2013 တွင် 9:31 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Thank you for this message. I has really encouraged me because I have been havingatough time for around 12 အနှစ်, battling with an unheard of illness and I really want to deepen my relationship with God. I’m at the point where nowadays I just feel numb to emotions, but I believe that the Holy Spirit is urging me to trust Jesus and depend on Him.
မန် • စက်တင်ဘာလ 18, 2013 တွင် 11:03 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Such an enlightened post and really helps you put things in perspective, just lost my brother3months ago to multiple myeloma and my mum is in the severe stages of dementia I know that to be able to cope I have to draw my strength from God, and rejoice that the day before he pass he let me lead him to the Lord and gave his life. ကောင်းမွန်သောအလုပ်တက်အောင်ထားပါ, you are inspiring my 18 year old son to write music and keep up with his piano, stay blessed!
Corrie Reynolds • စက်တင်ဘာလ 18, 2013 တွင် 11:13 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
You always haveaway of putting into words what I think but am unable to write. You have many true talents. Thank you for using them for what you were called to do. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျညီအစျကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ.
DeniseSheppard • စက်တင်ဘာလ 18, 2013 တွင် 12:08 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မစ္စတာ. Barefield…….you areawonderful, shining example of God’s love. He has blessed you in lyric to share His message. I appreciate reading what you write, listening to your music and would love to hear you in person some time. Thanks for being obedient in sharing God’s words; always, အပြုသဘောဆောင်, uplifting and right on point! Good Bless You Brother!
BrandonPulley • စက်တင်ဘာလ 18, 2013 တွင် 12:30 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Harry Nanthambwe • စက်တင်ဘာလ 18, 2013 တွင် 3:24 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
This hs what I always want2hear and read. ချီးမွမ်းခြင်းကိုဘုရားသခငျသညျ4u bra.
Tendai • စက်တင်ဘာလ 18, 2013 တွင် 7:41 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
This is encouraging stuff, အစ်ကို. Thank you for reminding me of the gospel; the foundation of every Christian life.
Gomezgani Saka • စက်တင်ဘာလ 19, 2013 တွင် 12:46 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒက်ဘီ • စက်တင်ဘာလ 19, 2013 တွင် 9:09 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဖေါ်ပြ: နေ့စဉ်ဘဏ္ဍာ | ဘဏ္ဍာရေးမှူးခရစ်တော်အား
Paul Sembereka II • စက်တင်ဘာလ 21, 2013 တွင် 5:19 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Bobby • စက်တင်ဘာလ 22, 2013 တွင် 9:52 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Sunge • စက်တင်ဘာလ 24, 2013 တွင် 3:30 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အာမင်. Thank you so much for your spirit filled guidance and teaching. Love this blog!
Kaila • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 2:58 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
I agree that often times when people offer up the sayings you used, they don’t always make you feel better. My family and I experienced that this summer at my cousin’s funeral. He was shot and killed by someone he consideredafriend, two days before his 19th birthday. None of the so-called encouraging words were helpful because the main question we all had was, ” Why him, he was justa‘baby?” ဒါပေမဲ့, afterwards we look back and see that even though it wasasad occasion it brought our family closer together and reevaluate our relationships with each other and with God. We also gainedanew family member not soon after in his daughter, who could be his twin.
Angie • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 5:03 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
I so needed to read this right now. ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ.
CynthiaAghomon • အောက်တိုဘာလ 4, 2013 တွင် 1:09 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
This is so encouraging..God has never failed and he is not about to start with any of his children..we just need to keep hope alive and believe that He will never leave us nor forsake us. ရောမ 8:18 says for I reckon that the sufferings of this present times are not worthy to be compared to the glory which shall be revealed in us..amen
သငျသညျ • အောက်တိုဘာလ 10, 2013 တွင် 1:59 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Yet again, I have been cut to heart!I am ill at the moment and I was wondering why the Lord was letting these things happened to me. In my boredom I was going through the FB pages of my favourite celebs and I came across your website. Alas! The Lord answered my prayer and spoke directly to me! (Through Trip) It’s like Trips messages are tailored just for me (That’s because the Holy Spirit is using him to minister to us)….God always rebukes me through him (his music,blog posts and sermons) I think I was focusing to much on this hotel that isn’t my home. So now I know why I am ill (what the Lord is trying to teach me through this trial)…God continue to bless you Trip Lee, it’s amazing that your ministry reaches us (the saints in Africa) and though we’ve never met, I feel like I know you personally because I can relate to everything you say. And because your music really rebukes, အားပေး, corrects, teaches me!….. မင်္ဂလာရှိသောနေပါ!!!!!!!!!
pelumi • နိုဝင်ဘာလ 3, 2013 တွင် 10:03 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
KevinSteele • နိုဝင်ဘာလ 7, 2013 တွင် 9:02 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Sherice • ဒီဇင်ဘာလ 2, 2014 တွင် 9:53 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
I am appreciative and encouraged by this…အာမ!